Fomba azo antoka dimy hampisondrotana ny fiovam-ponao amin'ny media sosialy | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 2, 2018 Alakamisy, Aogositra 2, 2018 Rekha Pant
Tsy lazaina intsony fa ny fomba mahomby indrindra hanatonana sy hamoronana fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ireo mety ho mpanjifa dia amin'ny alàlan'ny media sosialy. Afaka mahita mpampiasa an'arivony tapitrisa amin'ny sehatra media sosialy isan-karazany ny olona iray; dia fandaniam-poana tokoa izany raha tsy manararaotra an'io fotoana mahafinaritra io. Androany dia ny te ho hita, ho re, ary hahatsapa no antony rehetra mahatonga izany saika ny olona rehetra mankany amin'ny kaontiny mba handefa ny eritreriny.
Mila mahatakatra tsara ireo sehatra media sosialy ireo ny olona iray mba hananana paikady izay hampiroborobo ny fiovam-po. Mety hahasosotra be amin'ny voalohany izy io satria maharitra fotoana fohy vao ho tonga ny valiny andrasana. Ny fomba tokana hanatanterahana an'io dia ny fandinihana ny fomba fiasan'ireo sehatra ary hamolavola drafitra mivaingana alohan'ny handaniana vola an'arivony dolara amin'ny fampielezan-kevitra izay tsy hahomby.
Manankarena fampahalalana momba ny fomba hanamafisana ny fivezivezena amin'ny media sosialy sy ny fiovam-po ny tontolon'ny Internet saingy ny fahitana ny fomba mety hahakivy ny olona, ​​dia nohenjaninay hatramin'ny dimy. Andao atomboka ny fihodinan'ny baolina:
Milalaova amin'ny Visuals
Misy lojika ao ambadiky ny klise, "sary iray mandoko teny arivo". Haingana be ny zava-drehetra ankehitriny ary tsy manam-paharetana intsony ny olona hamita famakiana lahatsoratra lava. Tian'izy ireo haingana izany, ary ny fomba iray hanatanterahana izany dia amin'ny alàlan'ny sary. Infografika, fampisehoana, horonan-tsary, sary dia voaporofo fa mahatratra 94% ny fomba fijery sy fizarana bebe kokoa raha oharina amin'ny atiny izay misy sary aotra. Ary fantatrao ve izay mety kokoa amin'ny visual amin'izao fotoana izao? Tsy mila pro ianao fa afaka mamorona azy ireo fotsiny miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana sary an-tserasera. Ny Visual dia mandaitra ihany koa amin'ny fisintomana ny sain'ny mpampiasa an-tserasera, izay no dikan'ilay teboka iray manontolo.
Fantaro ny kendrena
Ampahany amin'ny famoronana atiny mendrika ny tsindry eo amin'ny bokotra fizarana dia ny famantarana hoe iza ny mpihaino kendrena. Ny karazan-teny isan-karazany dia manintona ireo olona avy amin'ny sokajin-taona, asa ary fahalianana samihafa, izany no maha-zava-dehibe ny fahalalana ireo personas ireo. Manana toerana malefaka ho an'ny orinasa azon'izy ireo resahina ny olona, ​​ary fomba iray hanaovana izany ny fitenenana ny fiteniny. Arakaraka ny halalin'ny fahalalan'ny mpihaino no hahamora ny famoronana atiny avo lenta sy zaraina.
Ireo zava-mahatalanjon'ny fanohanan'ny mpanjifa
Ny fahazoana ny sain'ny mpanjifa dia zavatra iray, fa ny fahafantarana fa misy olona vonona hanampy azy ireo sy hamaha ny olany dia iray amin'ireo fomba azo antoka hahazoana fiovam-po. Betsaka ny serivisy fandefasan-kafatra mamela ny orinasa hifandray amin'ireo mpihaino azy an-tserasera amin'ny sehatra manokana. Vonoina mora foana ny olona rehefa tsy voavaly ny fanontaniany dia izany no antony ankafizin'izy ireo ireo orinasa tena mandany fotoana mamaly ny fanontaniany. Misy ny safidy hanamboarana azy ireo valiny, mila mitandrina ny olona iray rehefa mandeha amin'ity fomba ity satria afaka manidy ny mpanjifa koa izy io indrindra rehefa tsy namboarina manokana na tsy toa ny masinina ny valiny.
Fanindriana ny bokotra havanana
Ny fifanakalozana dia mifandray mivantana amin'ny bokotra antso-to-action. Tsy maninona ny atiny mahafinaritra, raha tsy mahita ny bokotra fiantsoana andraikitra ny mpanjifa mety ho avy dia tsy hitranga ny fiovam-po. Ireo bokotra ireo dia manara-maso haingana ny fifanakalozana azo antoka sy tsy misy tohiny, na zavatra tsotra fotsiny toy ny mankany amin'ny tranonkalan'ny orinasa na mividy vokatra. Dingana iray izay mitaky dingana maromaro dia alaina amin'ny tsindry iray monja, izany no antony tsy maintsy ahatongavan'ireo bokotra ireo eo an-tampon'ny lisitry ny laharam-pahamehana rehefa tonga ny paikadin'ny fampielezana haino aman-jery sosialy.
Fantaro izay holazaina
Ny fomba stratejika iray amin'ny laharana eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana dia ny fampiasana ny teny lakile mety. Ireo dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny laharam-pikarohana organikan'ny tranokala, ary singa iray lehibe amin'ny doka fikarohana karama. Tranga iray: tenifototra. Zava-dehibe amin'ny fanaovana hita maso ny atiny iray satria manintona ny mpanaraka sy ny tsy mpanaraka azy ireo, miampy izy ireo afaka mitarika ireo mpanjifa mety ho any amin'ny tranonkalan'ny orinasa ary mividy vokatra.
Ny fampiroboroboana ny fiovam-po dia miresaka momba ny tsy fitoviana, fahatakarana lalina ny sehatra media sosialy, hamantarana hoe iza ny mpihaino kendrena, ary ny fahalalana izay teny na sary hampiasana. Haingana ny olona mizara votoaty azon'izy ireo ifandraisana, ka tsara kokoa ny manampy singa olombelona na ara-pihetseham-po amin'ilay atiny. Ento mitaingina azy ireo.
Tags: fiovam-ponyhaino aman-jery sosialysary
ViduPM: Sehatra fitantanana sy tatitra momba ny tetikasa SEO an-tserasera